I-loft emangalisayo maphakathi nesikhungo sezomlando - I-Airbnb
I-loft emangalisayo maphakathi nesikhungo sezomlando
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Dirk
Ikhaya lethu yikamelo elithandwayo elinesimo sobuciko. Yonke ifenisha nokuhlobisa kusungulwe futhi kusungulwe ama-Artisans aziwayo e-Don Bosco Association. Uzoba nendawo yakho wedwa kanye nomlingani wakho ene-fireplace nokubukwa kwengadi.
- Ukuhlanzeka: izisebenzi zethu zokugcina izindlu ziqeqeshwe ngobuchwepheshe ukuze amakhaya ethu asebenze kahle futhi acocekile kuzo zonke izivakashi.
- Indawo: Sitholakala enkabeni yesikhungo esingokomlando se-Cusco
Ikhaya lethu elisha linegumbi lokugezela elilodwa. Sihlanganisa indawo yokubasa umlilo nendawo yokuhlala. Uzoba sendaweni encane enengadi enhle eluhlaza maphakathi nedolobha, indawo ehluke kakhulu ngaphakathi kwesikhungo somlando esimatasa.
Isevisi yomuntu siqu nosizo. Sinikeza isevisi engabizi yokuwasha izingubo, isidlo sasekuseni, isidlo sasemini, isidlo sakusihlwa kanye nesevisi yekamelo uma kucelwa.
4.96 · 147 okushiwo abanye
Usendaweni eseduze ne-Qoricancha, Isikhungo Somlando